DF Somaliya oo war saxaafadeed deg-deg ah ka soo saartay qaraxii maanta ee duleedka Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Somaliya oo war saxaafadeed deg-deg ah ka soo saartay qaraxii maanta...
DF Somaliya oo war saxaafadeed deg-deg ah ka soo saartay qaraxii maanta ee duleedka Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – War-Saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay qarixii Maanta qabsaday gaari Hoomeey ahaa oo dad badan ay ku dhinteen, kaas oo ka dhacay agagaarka Isbitaalka Xaawa Cabdi ee duleedka Muqdisho.
War qoraal ah oo kasoo baxay Wasaaradda ayaa waxaa loogu tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay qaraxaasi, waxaana Wasaaradda ay ku eedeysan inay ka dambeeyeen Ururka Al-Shabaab oo mararka qaar weeraro qaraxyo ah la beegsada Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Wasaaradda Warfaafinta ayaa sidoo kale xustay, in ay ka adkaato Al-Shabaab dagaalka ay kula jirta, iyada oo kaashaneyso Shacabka Soomaaliyeed.
Qaraxii Axadda maanta ah ka dhacay agagaarka Isbitaalka Xaawa Cabdi ee deegaanka Lafoole ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen in ka badan 10 Ruux, halka tiro kale ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo dhammaantood Shacab ahaa.
Haddaba hoose ka khariso War saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya: